Stationery fekitori - China Stationery Vagadziri uye vanotengesa
Stationery chishandiso chinodiwa nemunhu wese, chikuru chishandiso chishandiso chevadzidzi kuti vadzidze, uye stationery muunganidzwa wevanhu vazhinji. Izvi zvinotevera zvinyorwa zviripo: mapenzura, eraser, penzura inorodza, penzura kiredhi, krayoni, madhimoni, bhuku reruzhinji, kadhi rekunyorera, peni, inosimudzira, mamaki ebhodhi machena, mamaki anogara aripo, mapini & clip, nezvimwe. Zvinyorwa zvedu zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro isina chepfu uye isina hwema zvinhu. Tinogona kugadzirisa zvigadzirwa zvako, kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakapetwa zvakasiyana nemutengo wemakwikwi. Ivo vakanakira zororo, mapato, vadzidzi, chikoro chinovhura, zvipo zvekudzokera kuchikoro, nezvimwe.
Wood Yakavezwa Cartoon Pen
Metal Penzura Toppers
Hot Kutengesa Gel Pens
Squishy Gel Pens & Notibhuku